ट्रेलर रिलिजकै दिन दीपकको चेतावनी- चलचित्र क्षेत्रका लागि अनसन बस्नसक्छु
नेपाल लाइभ शुक्रबार, असोज ३, २०७६, १९:५५
काठमाडौं- कलाकार दीपकराज गिरी नेपाली हलमा चल्ने विदेशी सिनेमाहरूप्रति सधैं पोखिने गर्छन्। केहीदिन अघि उनले एउटा स्टाटसमा विदेशी फिल्मलाई सरकारले दिएको प्राथमिकतामाथि व्यंग्य गर्दै स्टाटस लेखेका थिए।
उनले लेखेका थिए- नेपाली सिनेमा भारतमा सेन्सर हुन ३ महिना लाग्छ। त्यो पनि अंग्रेजीमा लेखिएको स्क्रिप्ट दिनुपर्ने, अनेकौं दुःख पाउनु पर्ने त छंदैछ। तर, हिन्दी फिल्मचाहिँ शुक्रबार उता रिलिज हुन्छ। सोही दिन बिहानै यहाँ सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय टोपी लगाएर हिन्दी भाषाको फिल्म हेरेर तुरून्त ३ घन्टामा सेन्सर गरेर खाजा खाएर निस्कन्छन्। अब भन्नुस हामी कहाँ छौं? कहाँबाट सञ्चालित छौँ?
त्यसभन्दा अघि पनि दीपकराजको ‘छ माया छपक्कै’को रिलिज मिति भदौ २७ बाट सरेर असोज २४ गते पुगेको थियो। यसो हुनुमा पनि उनले दोष हिन्दी सिनेमामाथि नै थोपरेका थिए। त्यतिबेला पनि आक्रोसित हुँदै दीपकले चलचित्र विकास बोर्ड र सरकारमाथि व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए।
आउँदो २४ गते फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ रिलिज हुँदैछ। शुक्रबार काठमाडौंको वान सिनेमा हलमा 'आकस्मिक प्रेस मिट' भन्दै फिल्म निर्माण टिमले ट्रेलर सार्वजनिक गर्‍यो। सोही कार्यक्रममा दीपकराज अन्य दिनजस्तै आक्रोसित सुनिए। अनुहारमा हाँसो देखिएता पनि उनले ज्यादा गुनाासो मात्र पोखिरहे।
उनको गुनासो थियो- नेपालमा सिनेमा बनाउन भन्दा रिलिज गर्नमा असाध्यै पापड पेल्नुपर्छ। उनले एउटा टुक्का जोड्दै भने, ‘श्राद्ध गर्न भन्दा सिदा पुर्‍याउन गाह्रो भनेजस्तै छ हाम्रो नेपालमा। प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो हो तर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनु जरुरी छ।’
आफूहरूले गतसाल फिल्म रिलिज ताका तीतो अनुभव बोकेको सुनाए। ‘यद्यपि, त्यतिबेला सिनेमाले रेकर्ड राख्यो। सिनेमामा धेरै वटा सोहरू गुमाउनु परेको छ। त्यसबाट परेको असर हामीलाई थाहा छ। म वर्षमा एउटा फिल्म बनाउने निरिह निर्माताले यसबारेमा सोच्न सक्दिनँ। हरेक सिनेमा जुध्नै पर्छ र तँ भन्दा म बलियो म भन्दा तँ बलियो भनेर बलियो प्रस्तुत गर्ने बेला हैन हो। संसारभरि सोहरू हाउसफूल भयो भने थपिन्छ। तर, हामी त्यस्तो निरीह प्राणी हौं कि सो हाउस फूल भएर पनि हामीले आधा सो गुमायौं।’
यसको दुःखलाग्दो कारण भने सिनेमामाथि राजनीति हुनुलाई लिन्छन् दीपक। भदौमा फिल्मको रिलिज मिति पर सार्दा हिन्दी सिनेमाबाट भागेको आरोप पनि उनले खेपे। तर, आफूहरू हिन्दी फिल्मदेखि नडराएको बताउँछन् उनी। ‘मलाई नेपाली तथा हिन्दी सिनेमासँग डर लाग्दैन।सिनेमामा राजनीति गर्नेसँग डर लाग्छ।’
दीपकले यही विषय पटक पटक उठाइरहनुको आशय थियो कि नेपाली फिल्मलाई नेपालका हलहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्‍यो।
नेपाली फिल्म उद्योगको बचावटको लागि प्रवृत्तिको विरुद्ध आफूले आवाज उठाएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘दीपकले किन बारबार हिन्दी फिल्मबारे कुरा गरिरहन्छ? तर, मैले पनि उठाइनँ भने इन्डस्ट्री खतम भइहाल्छ नि।’
आफूहरू हिन्दी फिल्मसँग डराउने कुरामा उनी असहमत देखिए, ‘नेपाली फिल्मको प्रेसर नभइदिएको भए हामी हिन्दी फिल्मसँग भिड्छौं। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले भिडेकै हो।’
'चलचित्र क्षेत्रमा गोविन्द केसी'
ट्रेलर रिलिजको अधिकांश समय दीपकले विदेशी सिनेमाप्रतिको आक्रोस नै पोखे। भावावेशमा आएर उनले चलचित्र क्षेत्रमा पनि गोविन्द केसी जन्मन सक्ने चेतावनी दिए। ‘म विदेशी सिनेमाको बढ्ता हाली मुहालीको आवाज उठाइरहन्छु। यसैको नाममा मलाई पेलिरहन्छ भने चलचित्र क्षेत्रमा गोविन्द केसी देख्नुपर्छ।’
‘त्यसोभए तपाईं अनसन बस्नुहुन्छ' भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘बस्छु,तपाईंहरू सबै आउनुहोला।’
‘केही मान्छेले यसले हिन्दी सिनेमाको विरोध गरिहन्छ र यसलाई पेलिरहन्छ भनेर सोच्नुभयो भने त्यो दिन पनि आउनसक्छ। विदेशी सिनेमाको अतिक्रमणको बारेमा कसैले पनि बोलिरहेको छैन। बोल्दा यस्तो आउँछ भने यो पनि हुनसक्छ।’
ट्रेलरमा ‘वडा नम्बर छ’ को गन्ध
कार्यक्रममा जब फिल्म निर्माण टिमले ‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलर सार्वजनिक गर्‍यो, तब टिमले एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो- के यो वडा नम्बर छ को निरन्तरता हो?
उनीहरूको जवाफ थियो- हामीले बनाएको फिल्ममा ‘छक्का पञ्जा’कै तिनवटा अनुहार एक अर्कासँग मिल्दैन थिए। फरक फरक अनुहारका थिए। भलै फिल्मको जनरा कमेडी नै हो।’
ट्रेलरअनुसार फिल्म राजीनितक पृष्ठभूमिमा आधारित प्रेम कथामा आधारित छ। 'वडा नम्बर छ' कै फेबर आएको कुरा निर्देशक दीपेन्द्र लामा लगायत दीपक–दीपा पनि स्वीकार गर्छन्। तर, फिल्मको कथावस्तु विल्कुल फरक भएको उनीहरूको दाबी छ।
यद्यपि, ‘छ माया छपक्कै’मा अघिल्लै फिल्मका स्वाद आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा रिलिजपश्चात नै थाहा हुन्छ।